Sheekada Filimka Savyasachi: Naga Chaitanya waxaa hareeyay R Madhavan mashruucaan fariintiisa dhex dhexaadka tahay – Filimside.net
Sheekada Filimka Savyasachi: Naga Chaitanya waxaa hareeyay R Madhavan mashruucaan fariintiisa dhex dhexaadka tahay
Taariikhda: November 4, 2018
Filimka Telugu ah Savyasachi ayaa tiyaatarada saaray wuxuuna soo baxay Jimcadii aan kasoo gudubnay ama 2 November 2018 waana filim ay ku xifaaltameen labada atoore ee caanka ah Naga Chaitanya iyo R Madhavan.
Jilaayaasha Filimkan: Naga Chaitanya, Nidhhi Agarwal, R Madhavan, Bhumika Chawla
Fariinta Filimka Savyasachi Oo Kooban: Vikram Aditya (Naga Chaitanya) waa wiil aad u wanaagsan balse halka dhib uu qabo ayaa ah in gacantiisa bidix ama jirkiisa qaybta bidix oo dhan uusan isaga xakameyn karin waxaana ku dhex jiro mataankiisa oo aan la arkin kuna haayo dhibaato aysan dadka u jeedin ee kaligiis dareemo!
Vikram Aditya (Naga Chaitanya) wuxuu jaceyl u qaadayaa gabadha qalbiga furan Chitra (Nidhhi Agerwal) waxaana dhex maraayo xiriir mar hagaagsan marna qaloocsan ileen Vikram Aditya (Naga Chaitanya) mataankiisa oo aan loo jeedin ayaa ku dhex jiro oo iska maamusho gacantiisa bidix ama jirkiisa qaybta bidix oo dhan.
Balse nolosha Vikram Aditya (Naga Chaitanya) waxay is badaleysaa marka uu lasoo xariiro ninka maskaxda badan Arun (Madhavan) wuxuuna rabaa inuu Vikram nolosha u diido isaga iyo walaashiis ka weyn Bhumika Chawla.
Laadarka awooda badan sidoo kalena xeeladiisa aad u sareyso Arun (Madhavan) aargudasho ayuu u socdaa balse ma fahansano Vikram waxa uu ninkan ka rabo waana sababaha loo daawanayo qaybaha dambe filimkan sida Vikram uu kaga bad baadayo halista kaga imaaneyso ninka aan laga baxsan karin Arun (Madhavan).
Maxaa Laga Yiri Bandhiga Jilaayaasha Filimkan: Naga Chaitanya wuxuu la yimid door wajiyo kala duwan xambaarsan sidoo kalena bandhig heer sare ah ayuu la yimid oo uu darajo kale ku gaari karo.
Balse hadal heynta iyo xiisaha filimkan waxaa qaatay R Madhavan iyo doorkiisa xumaanta ah oo si cajiib badan u matalay marwalbo oo uu shaashada soo galana micno weyn sameenayo.
Nidhhi Agerwal booskeeda waa mid wacan laakiin waqti ku filan lama siinin waana cilad kale oo jirto madaama filimkan Naga Chaitanya oo labo waji ah iyo R Madhavan ku xifaaltamayaan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: Savyasachi waa filim fariintiisa wacan tahay sidoo kalena Director Chandoo Mondeti isku day wanaagsan ayuu sameeyay balse cilada waxay ka jirtaa qaybta labaad filimkan madaama halka saac hore daawashadiisa lagama xiisa dhigaayo shactirada iyo dhibka laakiin halka saac dambe habac sanaan weyn ayaa ka muuqato kaliya Action-kiisa ayaa wanaagsan qaybaha dambe.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimkan: Fariintiisa isku day ahaan waa mid wacan, bandhiga ay sameeyeen labada hogaamiye waa heer sare, shactiradiisa oo wacan iyo labo muuqaal Action heer sare ah oo ku jiraan.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Qaabka sheekada loo dhigay qaybaha dambe oo liidato iyo hogaamiyaasha filimkan oo loolankooda xili dadka caajiseen bilaabanayo.
Qiimeynta Sheekada Filimkan: 2.5/5 (Labo xidig iyo bar).
Gunaanad: Savyasachi waa fariin Telugu ku cusub balse caqabada heesato tahay in si heer sare ah loo dhigay qaybta labaad balse loolanka hogaamiyaasha filimkan oo ku xiiso galin doono awgeed waa la daawan karaa iyo halkiisa saac hore oo mada daalo wacan leh. Laakiin sida guud ma noqon doono filimkan mid tiyaatarada wacdaro xoogan ka dhigo.
Fadlan hoos ka daawo gooska filimka Savyasachi oo ay Naga Chaitanya iyo R Madhavan ku xifiltameen:
Waxaa Aqrisay 759